Nchoputa ndi nyocha gi na eme ihe kariri nke oma? | Martech Zone
Nchoputa ndi nyocha gi na eme ihe kariri nke oma?
Sunday, October 4, 2009 Wenezdee, Machị 23, 2011 Douglas Karr
O yiri ka usoro mgbasa ozi ọ bụla dị na ya ugbu a gụnyere nyocha ma ọ bụ atụmatụ ntuli aka na ya. Twitter nwere Ugboro abụọ, PollDaddy amalitela ngwa ọrụ Twitter, SocialToo nwere ngwa ntuli aka maka Twitter na Facebook, Zoomerang nwere ngwa ọrụ nyocha Facebook, na LinkedIn nwere ntuli aka ha na-ewu ewu ngwa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebugharị nyocha na ntuli aka iji mata nsogbu ndị otu ndị ahịa ha si ele ngwaahịa na ọrụ ha. Dị ka ndị a nnyocha e mere na ntuli aka ngwá ọrụ na-ọzọ juru ebe niile na mfe iji, anyị na-ahụ ọzọ na ndị ọzọ overall ma n'ozuzu àgwà nke ajụjụ na ndị na-eso utịp na-shrinking. Nyocha ndị a nwere ike ime ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ ihe ọjọọ karịa mma. Ide ederede nyocha ma ọ bụ ntuli aka ọjọọ na ịme mkpebi na nsonaazụ nwere ike imerụ ụlọ ọrụ gị.
Nke a bụ ihe atụ nke nyocha m nwetara ụnyaahụ:
Nsogbu nke a nnyocha e mere ajụjụ bụ na ọ bụ na-edochaghị anya na na-achọ ka m họrọ otu nhọrọ n’agbanyeghi na m nwere ike ikwenyeghị nke ahụ ọ bụla nke nzaghachi bụ eziokwu. Ebe ọ bụ na ejirila m nke ọma were ihe niile mana Ọrụ Ndị Ahịa, enwere m ike ịhọpụta Ọrụ Ndị Ahịa maka azịza m. N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ikwenye na ọ dị mkpa ịkwalite Ọrụ Ndị Ahịa ya. Nke a abụtụghị okwu ahụ… ọ bụ naanị otu nsonaazụ m na-amabeghị.
Ahụkwara m ntuli aka na nyocha emegburu ụlọ ọrụ nwere nnukwu ndị ahịa. Kama idozi nsogbu ndị a kọọrọ ugboro ugboro na ndị ahịa hapụrụ, ụlọ ọrụ ahụ na-ahọrọ ajụjụ nyocha ya na azịza ya iji lekwasị anya na mpaghara ha nwere ike ime ihe. Yabụ ụlọ ọrụ nwere nsogbu ha maara bụ isi ihe na ntụgharị ha naanị na-ezere ịjụ ajụjụ ga-egosipụta ya. Mah.
The nweta ndụmọdụ nke ụlọ ọrụ nyocha ndị ahịa nwere ike inyere gị aka iwulite a nyocha nke na-eji usoro kachasị mma ma na-enweta ọnụego nzaghachi dị elu. Jide n'aka na iso Blog ozi Ozi - ha nwere ọtụtụ ahụmahụ na nduzi na nyochaa nzaghachi ndị ahịa nke ọma.
Tupu ikpebie izipu nyocha Twitter gị ọzọ, ịnwere ike ị nweta ndụmọdụ nke ụlọ ọrụ nyocha ọkachamara. Ha nwere ike inyere gị aka ịmepụta ozi gị, bulie ọnụego nzaghachi, zere ajụjụ na-edoghị anya ma ọ bụ na-eduhie eduhie, ma ghọta oke njehie na nzaghachi.
I nwekwara ike iji igwe oru nyocha ihe siri ike karị. Abụ m nnukwu onye ofufe nke Mpempe akwụkwọ (obughi nani n'ihi na ha bu ndi enyi), kama nihi na achoro m imepe ihe omimi di omimi. Dabere na nzaghachi nke ajụjụ, enwere m ike iduga onye nyocha ahụ gaa na ajụjụ ọhụrụ nke na-abanye miri emi na nzaghachi ha.
Whonye Ka Want Chọrọ Soro Na-arụ Ọrụ?
Ihe Anyị Nwere Ike Learnmụta na Kanye, Taylor na Beyonce
Ọkt 6, 2009 na 2:50 AM
Ekwenyere m kpamkpam na nke a, Doug! Iji mee ka okwu gị kwalite, ọ dị mma ịmara na imirikiti nke ihe na-agafe maka nyocha na-eleghara mmetụta uche anya kpamkpam. Ọtụtụ mgbe, "ndị na-eme nchọpụta" na-enweta ihe ndị mmadụ chere dị ka azịza ezi uche dị na ya ma ọ bụ nke dị mma. Anyị nwere ike ịsị na anyị buru ụzọ zụta ihe na ọnụahịa, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ihe ọzọ na-eme mkpebi ahụ.
Ọkt 6, 2009 na 9:42 AM
Ọkt 6, 2009 na 3:12 PM